International Archives - Khit Style
အမေရိကန် သမ္မတ Donald Trump နဲ့ သမ္မတကတော် Melania Trump တို့ ၂ ယောက်လုံး Covid-19 ရောဂါ ကူးစက်ခံခဲ့ရ
Posted on October 2, 2020 July 1, 2021 by soeminnaing
အမရေိကနွ သမမြတ Donald Trump နဲ့ သမမြတကတောွ Melania Trump တို့ ၂ ယောကလွုံး Covid-19 ရောဂါ ကူးစကခွံခဲ့ရကှောငွး သမမြတထရမွ့က Twitter က တဆငွ့ ကှညောခဲ့ပါတယွ။ ခကှခွငွှး ကှာရနတွငွးဝငွ ပှီး အားလုံး နဲ့ သီးခှားခှဲနမှော ဖှဈသလို ပှနကွောငွးအောငွ နမယလွေို့ လညွး ရေးပါတယွ။ သမမြတ အနီးကပွ…
🇺🇸 အမေရိကန် FDA က #အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရအောင်လျှောက်မယ်လို့ ကတိပြုထားတဲ့ တရုတ်ကာကွယ်ဆေး SinoVac ၂၀၂၁ နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာရပါမယ်
Posted on September 25, 2020 by soeminnaing
🇨🇳 တရုတ်ကာကွယ်ဆေး SinoVac ဟာ ၂၀၂၁ နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာရပါမယ်။ SinoVac ကို သဘောကျတာတစ်ခုက CEO ဖြစ်သူ Yin Weidong က 🇺🇸 အမေရိကန် FDA က #အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရအောင်လျှောက်မယ်လို့ ကတိပြုခဲ့ခြင်းပါ။ 💉 SinoVac သာ 🇺🇸 FDA က #အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရင်ထိုးရဲပါတယ်။ 🇺🇸 FDA ကဒီရက်ပိုင်း #လူတွေအန္တရာယ်ကင်းပြီး #ဆေးအာနိသင်တကယ်ထက်မြက်အောင်…
မိန်းက လေး များ online shopping တွေ အ ရမ်း အားပေး မယ် ဆိုရင် ဒါလေး ဖတ်ပြီး သတိ ထား ကြပါ….
Posted on September 3, 2020 by soeminnaing
မိန်းက လေး များ online shopping တွေ အ ရမ်း အားပေး မယ် ဆိုရင် ဒါလေး ဖတ်ပြီး သတိ ထား ကြပါ…. ပြီးခဲ့တဲ့ November 11ရက်နေ့ဟာ တရုတ် နိုင်ငံရဲ့ တကယ်ကို အကြီးဆုံး shopping holiday ကြီးပါ ၊ ပြီးတော့ Singles Day လို့လည်း ခေါ်ဆိုကြပါတယ်…
သေချာမှ ကြေငြာတဲ့ အမေရိကန်တို့ရဲ့ စစ်ရေး စစ်ဗျူဟာနဲ့ ထင်တစ်လုံးမာန်ကြွပြီး အိမ်မပိုင်ဘဲ ဂေါ်လီလုပ်ချင်တတ်တဲ့ တရုတ်တို့ရဲ့ စစ်ရေး စစ်ဗျူဟာခြားနဲ့ချက်ကြီး ( ငါလုပ်ရင် သူနာမှာပဲဆိုတဲ့ အင်မတန်သေးသိမ်တဲ့အတွေးနဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ရန်စတင်တယ်ဆိုကတည်းက တရုတ်ကြီးမှားခဲ့တာပေါ့. )
Posted on August 29, 2020 by khitstyle
အမေရိကန်တို့ အစ္စရေးတို့က စစ်တိုက်တဲ့အခါ စစ်ဗျူဟာခေါ်တဲ့ စစ်ဆင်ရေးအစီအစဉ်ကို အစမှ အဆုံးအထိ အကျိုး အပြစ် သူ့အား ကိုယ့်အား ကြာချိန် ဆုံးရှုံးနိုင်မှု့ ရန်သူရဲ့တန်ပြန်မှု့ မိမိရဲ့ခံနိုင်ရည် စသဖြင့် အဖက်ဖက်က တွက်ချက်ကြတယ် အမှန်တရား အရှိတရားအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတွေးကြတွက်ကြတယ် မိမိကိုယ်ကို ထင်တလုံးစိတ်ထားတာမျိုး တစ်ဖက်ကိုလျော့တွက်တာမျိုးလုံးဝမလုပ်ဘူး။ အစီစဉ်သေချာရေးဆွဲပြီးရင် အစမ်းလေ့ကျင့်တာတွေကို စိတ်ကျေနပ်လောက်အောင်အထိ အထပ်ထပ်လေ့ကျင့်တယ် ပုံစံငယ် ပုံစံတုတွေတည်ဆောက်ပြီးကိုကျင့်တာ။ စစ်တိုက်တာ အင်မတန်စနစ်ကျတယ်။ သူတို့ဟာ…
တရုတ်ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး တော်လှန်ရေး ( သို့မဟုတ် ) တရုတ်နဲ့ အမေရိကန် ရဲ့ကုန်သွယ်စစ်ပွဲ၊ နည်းပညာစစ်ပွဲ မှသည် ငွေကြေးစစ်ပွဲ သို့ရောက်လာခြင်း
တရုတ်ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး တော်လှန်ရေး ( သို့မဟုတ် ) တရုတ်နဲ့ အမေရိကန် ရဲ့ကုန်သွယ်စစ်ပွဲ၊ နည်းပညာစစ်ပွဲ မှသည် ငွေကြေးစစ်ပွဲ သို့ရောက်လာခြင်း အမေရိကန် ဒေါ်လာကိုဗဟိုပြုတဲ့ကမ္ဘာ့ငွေကျေးစံနစ်ကိုစွန့်ခွာပြီး သီးခြားငွေကျေးဇုံထူဘို့ရပ်ရှားကအရင်နှစ်လောက်ကထည်းကစတင်ခဲ့ပါတယ် တရုတ် ကလဲဒေါ်လာကိုစွန့်ခွာဘို့အရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းနံ့ကိုပြင်ဆင်အထိုင်ချနေပါတယ် အယ်ဒီလိုဒေါ်လာမှသည်ယွမ်ဆီသို့အပြောင်းအလဲမှာလွယ်ကူခြောမွေ့အဆင်ပြေရေးကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကျေးအဖြစ်အသုံးပြုခြင်ကများစွာလွယ်ကူအဆင်ပြေစေပါလိမ့်မယ် တရုတ် ဟာ ကမ္ဘာမှာပထမဆုံးနိုင်ငံ တော်( ဗဟိုဘဏ်) ကထုပ်ဝေတဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကျေး အဖြစ်နဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ယွမ်ကိုစတင်စမ်းသပ်အသုံးပြုနေပါပြီ ဒစ်ဂျစ်တယ်ယွမ်ဟာစက္ကူယွမ်ကိုတနှစ်နဲ့၁၈လအတွင်းမှာလုံးဝနီးပါးအစားထိုးပါတော့မယ် ကိုဗစ်19 ကူးစက်ရောဂါကြောင့်စက္ကူငွေကိုသုံးစွဲဘို့ကြောက်ရွံ့လာကြခြင်းကလဲဒစိဂျစ်တယ်ငွေကျေးကိုအများကြိုက်ဖြစ်လာစေဘို့တွန်းပို့နေတယ် အမေရိကန် ကိုယ်တိုင်လဲဒီစံနစ်ကိုပြောငင်းလဲဘိုလွှတ်တော်မှာစတင်ဆွေးနွေးနေပါပြီဒီကဏ္ဍမှာလဲအမေရိကန် ပထမဖြစ်ခွင့်တော့မရနိုင်ပြနန်ပါလေဘူး ဒီမှာမေးခွန်းကတရုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ယွမ်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာရဲ့နေရာကိုအစားထိုးနေရာယူဘို့လားဆိုတာပါ…
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ၁၂ ယောက်မြောက်ရဲချုပ်ရာထူးအသစ်ခန့်အပ်လိုက်ပြီး လက်ရှိရဲချုပ်ကြီးအငြိမ်းစားယူပြီဖြစ်
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိ ရဲချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ရဲဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကျတ်ထစ် ချိုင်းကျင်ဒါ သည် လာမည့် ဩဂုတ်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် အငြိမ်းစားယူတော့မည့်ဖြစ်သည့်အတွက် ယနေ့ ဩဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့မနက်ပိုင်းက ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရုံးနှင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရုံးမှ National Police Policy Committee တို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်အရ အသက် ၅၉ နှစ်အရွယ် ရဲဗိုလ်ချုပ်ကြီး စူဝပ် ကျဲန့်ယော့ဒ်စုခ် အား ရဲချုပ်ရဲထူးတာဝန်အားခန့်အပ်လိုက်ကြောင်းထိုင်းရုပ်သံသတင်းဌာနများကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်းသိရ ။…
ပြင်သစ်၊ အီတလီ၊ ဂရိနှင့် ဆိုက်ပရက်တို့က မြေထဲပင်လယ် အရှေ့ဘက်တွင် ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်
မြေထဲပင်လယ် အရှေ့ဘက်တွင် ပြင်သစ်၊ အီတလီ၊ ဆိုက်ပရက်တို့နှင့်အတူ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဂရိက သြဂုတ် ၂၆ တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ ဂရိနှင့်တူရကီအကြား တင်းမာမှု မြင့်တက်နေခြင်း၏ အဓိကဆုံချက်ဖြစ်သော မြေထဲပင်လယ်အရှေ့ခြမ်းတွင် ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုသည် သုံးရက် ကြာမြင့်မည်ဟု ဂရိကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောကြားခဲ့သည်။ ဂရိကျွန်း ခရီတီနှင့်ဆိုက်ပရက်ကို ဝန်းရံနေသော ရေပြင်တွင် ဓာတ်ငွေ့သိုက် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့မှုကြောင့် နေတိုးအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော ဂရိနှင့်တူရကီတို့အကြား ပြိုင်ဆိုင်မှုများ…
ကမ္ဘာ စစ် ဖြစ်စေနိုင် တဲ့ ပဋိပက္ခများ နဲ့ တရု တ် – အိန္ဒိ ယ နယ် စပ် ပြသနာ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေအပြီး မှာ နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းမှု ပြေလည်ပြီ
Posted on June 23, 2020 August 8, 2020 by soeminnaing
ကမ္ဘာ စစ် ဖြစ်စေနိုင် တဲ့ ပဋိပက္ခများ နဲ့ တရု တ် – အိန္ဒိ ယ နယ် စပ် ပြသနာ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေအပြီး မှာ နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းမှု ပြေလည်ပြီ အိန္ဒိယ နဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ တို့ဟာ မကြာသေးခင်က ဂယ်ဝမ်နယ်စပ်မှာ အငြင်းပွားစရာ ရန်ပွဲတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်ခဲ့ရာကနေ ကမ္ဘာစစ် ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အထိ ပဋိပက္ခက ကြီးထွားခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်ကလည်း…
သန်းနဲ့ချီတဲ့ လူတွေရဲ့ အသက်ကို မနှမြောလျှင် ‘မိမိတို့ကို အန်တုနိုင်ကြောင်း’ တရုတ်က အိန္ဒိယကို ဒဲ့ စိန်ခေါ်ပြီ
တရုတ်အစိုးရရဲ့ သတင်းစာတွေဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံကို ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် စိန်ခေါ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ နယူကလီးယားပိုင်ဆိုင်တဲ့ နှစ်နိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့် စစ်ရေးကျွမ်းကျင်သူတွေက အခုလက်တလော ပဋိပက္ခတွေကို စိုးရိမ်နေချိန်မှာ တရုတ်သတင်းစာတွေက စိန်ခေါ်လိုက်တာပါ။ အိန္ဒိယအနေနဲ့ မိမိတို့ကို ဖက်ပြိုင်အန်တုလာပါက (၁၉၆၂)ခုနှစ်က အင်ဒိုချိုင်းနားစစ်ပွဲထက် လူအသေအပျောက် ပိုများလိမ့်မယ်လို့ သတိပေးခြိမ်းခြောက်ခဲ့တာပါ။ တရုတ်-အိန္ဒိယ ဗဟိုပြုတဲ့ အင်ဒိုချိုင်းနားစစ်ပွဲဟာ (၁၉၆၂)ခု အောက်တိုဘာလ (၂၀)ရက်နေ့မှာ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး၊ နိုဝင်ဘာ(၂၁)ရက်မှာ အိန္ဒိယက တရုတ်ကို…
ကမ္ဘာကျော် နပန်းသမားဘဝနဲ့ စည်းစိမ်တွေကို စွန့်လွှတ်ပြီး ရဟန်းဝတ်နေတဲ့ ကိုယ်တော်နှစ်ပါး . .
ကမ္ဘာကျော် နပန်းသမားဘဝနဲ့ စည်းစိမ်တွေကို စွန့်လွှတ်ပြီး ရဟန်းဝတ်နေတဲ့ ကိုယ်တော်နှစ်ပါး လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ စွဲလမ်းစိတ်တွေ၊ အတ္တတွေ၊ မာနတွေ၊ လောဘတွေ၊ စည်းစိမ်းတွေကြားမှာ ယစ်မူးအချိန်ကုန်နေတတ်ပြီး မတည်မြဲသောအရာကို တည်မြဲတယ် ထင်မှတ်ကာ ရန်သူမျိုး (၅)ပါးကိုတောင် မကြောက်တော့ဘဲ တတ်မက်နေတတ်ကြပါတယ်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောတော်မူတဲ့ စွန့်လွှတ်ခြင်းဟာ မြတ်သောတရားဆိုပေမယ့် တကယ်တမ်းကျတော့ တစ်စုံတစ်ခု၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို လက်လွှတ်အဆုံးရှုံးခံဖို့ ဆိုတာ သာမာန်လူတစ်ယောက်အတွက် မလွယ်ကူလှပါဘူး။ ယနေ့ နေထိုင်တဲ့…